Server PetrPikora.com dia ho anao manokana amin'ny fampiasana ny HSTS teknolojia (HTTP SafeStreet Transport Security) teknolojia teknolojia. HTTP Safe Security (HSTS) ny fampahalalam-baovao mahazatra fiarovana, ny fiarovana ny tambajotra sosialy dia ny fampiasana ny tranonkala fifaneraserana amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fametrahana ny tambazotra an-tserasera (tzv. cookie hijacking). Ny rafitra fiarovana dia mampiasa ny HTTP ho an'ny mpampiasa mba hahafahana mandefa HTTPS ho an'ny mpampiasa rehetra izay mampiasa ny HTTP protocols. HSTS definuje RFC 6797. Ny HTTP ho mpizara HTTP ho an'ny mpampiasa Hentitra-Transport-Security, Manampy anao amin'ny famaritana ny lisitry ny fiarovana an-trano, ny fomba fiasa vaovao hampiato ny mpanjifan'ny serivisy. Ny HSTS dia mampiasa tranonkala fampiasa amin'ny tranonkala (odposlechy) ho an'ny fiarovana an-trano. Ny hizaha ny HSTS rafitra, ny fitaovam-piadiana manerantany, ny fiarovana ny tontolo iainana, dia manana ny lanjany manokana amin'ny fampiasana fitaovam-pandraharahana amin'ny Internet. Staráme se o vaši bezpečnost!
Ny vohikala manangona ny manaraka vaovao momba ny fitsidihana:
Informace, izay tsy noraisina tamin'ny fomba mahatsikaiky. Ny olona rehetra dia manana adiresy mailaka, adiresy mailaka, adiresy adiresy Internet. Manana tombony amin'ny informatika amin'ny ankapobeny amin'ny filazam-baovaon'olon-tokana, mahaliana ho an'ny mpandika teny mahatsikaiky amin'ny tsiranoka.
Fotsiny nanangona vaovao (izany hoe. Received tsy misy aminareo mazoto manome ny vaovao) fampiasana isan-karazany ny teknolojia sy ny fomba, toy ny Internet Protocol adiresy, mofomamy, Internet Tags ny hafa. Izany vaovao dia hamela tsara kokoa Tailor afa-po amin 'ny mpampiasa sy hanampy mpanao dokam-barotra sy ny mpanohana hahatakatra tsara kokoa ny mpitsidika .
Amin'ny tranonkala fifaneraserana dia mamorona adiresy manan-danja an-tserasera ny adiresy an-tserasera. Ny fiarovana an-trano dia mampiasa ny fitaovana (adiresy, adiresy, mailaka adiresy mailaka) na ny adiresy mailaka sy ny tranonkala fifaneraserana ary ny adiresy an-tserasera sy ny Internet.
Google, toy ny antoko fahatelo mpivarotra, mampiasa ny hanompo dokam-barotra ao amin'ny toerana ity mofomamy. Amin'izato lokony mofomamy mahatonga Google hanompo doka ny mpampiasa mifototra amin'ny ny fitsidihana ity Ndao ho sy ny toerana hafa ao amin'ny Internet.
Ny ankamaroan'ny navigateur dia tonga dia nametraka ny antontan-taratasy manaiky mofomamy, fa ny navigateur azo nametraka ny handà mofomamy rehetra, na ny milaza fa ny mofomamy no nalefa. Misy endri-javatra sy ny tolotra Google dia mety tsy miasa araka ny tokony ho, raha ny mofomamy ireo sembana.
Raha tianao, afaka amin'ny fotoana rehetra ianao tsy mofomamy antontan-taratasy avy amin'ny Google Inc v Obsahové síti Google prostřednictvím Nanda DoubleClick Cookies.
Advertising Cookie Opt-out Plugin dia miezaka ny mampiasa Internet ao amin'ny Internet Explorer Internet Explorer "DoubleClick cookie", izay mety ho an'ny Google goavana ho an'ny fampivoarana ny tranokala ho an'ny mpampiasa.
Amin'ity fizarana ity dia tokony hanonona ny URL ny tranonkalanao ianao, ary koa ny anaran'ny orinasa, ny fikambanana na ny tsirairay izay mitantana ity tranokala ity sy ny vaovao mifandraika amin'ny marina.
Ny habetsaky ny fampahalalana izay ilainao hatao dia miovaova arakaraka ny fitsipika Eoropeana na ny lalàna. Ohatra, ianao dia mila manome adiresy ara-batana, laharan'ny orinasa.
Doporučený lahatsoratra: Ny adiresy web dia: https://petrpikora.com.
Ny fanangonanay ary ny antony anangonanay azy ireo
V této serti piše měli uvést, jaké osobní údaje shromažďujete od uživatelů a návštěvníků stránek. Môtô miorina amin'ny tranonkala fifanarahana - informace o nákupu; technické údaje - informace o cookies; ny fiarovana an-trano - informatika ny fampiasana ny adiresy mailaka.
Tokony hanome anao fanazavana momba ny fanangonana sy ny fitehirizana ny angon-drakitra manokana, toy ny angona momba ny fahasalamana.
Ankoatra ny famaritana ny mombamomba anao manokana, dia mila manondro hoe nahoana ianao no manangona azy ireo. Ireo fanazavana ireo dia tsy maintsy dinihina na ny fototra ara-dalàna ho an'ny fanangonana sy ny fitehirizana ny angon-drakitra manokana na ny fanekena an-tsitrapo ny mpampiasa.
Ny fampahalalana manokana dia tsy noforonina afa-tsy amin'ny fifandraisanao amin'ny tranokalanao. Ny angon-drakitra manokana ihany koa dia novokarin'ny rafitra ara-teknika toy ny endrika fifandraisana, fanehoan-kevitra, cookies, analytics, ary antontan-taratasy voarakitra an-tsokosoko.
Matetika, WordPress dia tsy manangona fampahalalana manokana momba ny mpitsidika ary manangona angon-drakitra hita ao amin'ny pejy "Admin" pejy ho an'ny mpampiasa voasoratra. Na izany aza, ny sasany amin'ireo plug-ins dia afaka manangona ny mombamomba anao manokana. Soraty eto ambany ny fampahalalana mifandraika etsy ambany.
Amin'ity andininy ity, tokony hampisehoana izay fampahalalana voarakitra amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra. Ireto ambany ireto ny fampahalalana momba ny antontan'isa fototra momba ny WordPress.
Doporučený lahatsoratra: Rehefa milaza ny hevitr'ity tranonkala ity ny mpitsidika, ny angon-drakitra hita ao amin'ny tsetsatsetsa fanamarihana, ny adiresy IP an'ny mpamaky, ary ny solon'anarana mpampiasa azy mamaritra ny browser dia manangona, manampy amin'ny fikarohana spam.
Amin'ity andininy ity, tokony hojerenao hoe inona avy ireo angona azo alefa ho an'ireo mpampiasa afaka mampakatra rakitra media. Ny rakitra rehetra nalefa dia matetika ampahibemaso.
Doporučený lahatsoratra: Raha mampakatra sary ao amin'ity tranonkala ity ianao, dia tokony tsy misintona sary ianao amin'ny alàlan'ny angon-drakitra (GPS EXIF)). Ny mpitsidika Site dia afaka mijery sy mijery ireo angon-drakitra avy amin'ny sary ao amin'ny tranonkala.
WordPress dia tsy ahitana ny endrika mifandray amin'ny default. Raha mampiasa plug-in ianao, ampiasao ity fehezanteny ity mba hampisehoana izay raketin'ny tena manokana rehefa misy olona mandefa fifandraisana amin'ny contact ary mandra-pahavitanao izany. Ohatra, azonao atao ny manondro fa mitahiry ny fampahafantarana nomena anao ianao amin'ny fotoana ifanakalozan-kevitra amin'ny mpanjifanao, fa tsy mampiasa an'io fanazavana io ianao.
Eto amin'ity andininy ity, tokony hanondro izay cookies ampiasainao ny habaka, anisan'izany ireo izay mamorona plugins, media sosialy, ary analytics. Ity ambany ity ny cookies izay napetraka amin'ny WordPress amin'ny alàlan'ny default.
Doporučený lahatsoratra: Raha manampy valiny ao amin'ny tranonkalanay ianao, dia avelao izahay hamonjy ny anaranao, ny adiresy mailaka, ary ny tranokalan'ny cookies. Amin'izany fomba izany, miezaka mampitombo ny fampiononanareo izahay rehefa manoratra fanamarihana vaovao, ka tsy voatery hameno izany intsony. Ireo cookies ireo dia haharitra herintaona.
Raha manana kaonty ianao ary misoratra anarana ao amin'ity tranonkala ity, mametraka cookie tsy maharitra mba hanamarina fa mahazo cookies ny browser-nao. Ity cookie ity dia tsy misy rakitra manokana ary ho nofoanana rehefa mihidy ny browser.
Rehefa tafiditra ao anaty tranokala ianao, dia manangana cookies maromaro ihany koa mba hamahanana ny fampahalalana momba ny famandrihana ary hametrahana ny sarimihetsika. Ny cookie logged dia manana fiainana mandritra ny roa andro, ary mampiseho ny famandrihana cookies amin'ny herintaona. Raha manamarina ny safidy "Remember me" ianao, dia ho afaka roa herinandro ny fisoratanao anarana. Raha misoratra ao amin'ny kaontinao ianao, dia hesorina ny cookie login.
Raha manitsy na mamoaka lahatsoratra ianao dia hisy fitahirizana hafa ao amin'ny browser-nao. Ity cookie ity dia tsy ahitana rakitra manokana ary manondro fotsiny ny kaonty Post izay vao nosoratana. Ny valim-panafahana dia mandany aorian'ny andro 1.
Nampiditra votoaty avy amin'ny toerana hafa
Doporučený lahatsoratra: Ireo lahatsoratra ao amin'ity tranonkala ity dia mety ahitana votoatin'ny tranonkala (ohatra, Video, sary, lahatsoratra, sns.). Ny votoatin'ny tranonkala hafa avy amin'ny tranonkala hafa dia mitovitovy amin'ny fomba fitsidihan'ny mpitsidika iray hafa.
Ireo vohikala mba hanangona vaovao momba anao mampiasa mofomamy, mametraka fanampiny fahatelo-antoko ampy sy manara-maso ny fifandraisana amin'ny nandinika lalina izany afa-po, anisan'izany ny ampy ny fifandraisana amin'ny nandinika lalina votoaty, raha manana kaonty ary tafiditra ao amin'ny tranonkala.
Amin'ity andininy ity dia tokony hampiseho hoe inona ny fitaovana fampiasana ampiasainao, ny fomba ahafahan'ireo mpampiasa misalasala ny manara-maso, ary tokony hanome rohy amin'ny fampahalalana momba ny fiainana manokana omen'ny mpandraharaha mpanadihady anao ianao.
Amin'ny alàlan'ny default, WordPress dia tsy manangona tahirin-kevitra mifandraika. Na izany aza, kaonty fampiantranoana maro no manangona angona tsy fantatra anarana. Azonao atao koa ny mametraka ny Plugins WordPress izay manome ny fanadihadiana. Amin'ity tranga ity dia ampio fanazavana eto amin'ity plugin ity.
Izahay no mizara ny angon-drakitrao
Ato amin'ity fizarana ity dia tokony hanome ny anarana sy ny lisitry ny rehetra fahatelo-antoko mpamatsy izay mizara ny Web angon-drakitra, anisan'izany ny mpiara-miasa, rahona tolotra, fandoavam-bola vavahady sy ny fahatelo-antoko mpanome tolotra, niara-milaza inona no fanazavana no hizara azy ireo sy ny antony. Raha azo atao, azafady manome rohy mankany amin'ny fiainana manokana ny politika.
Amin'ny alàlan'ny default, WordPress dia tsy manome fampahalalana manokana ho an'ny olona.
Hafiriana no itandremantsika ny angon-drakitrao?
Amin'ity fizarana ity, tokony hanazava ianao hoe hafiriana no mitahiry ny angon-drakitra manokana na angona avy amin'ity tranonkala ity. Raha toa ka takiana ianao handamina fandaharam-potoana iray, miaraka amin'ny fampahalalana momba ny hafiriana azonao tanterahana ny angona tsirairay sy ny antony itahiranao azy, dia mety tsy voatanisa eto ity vaovao ity. Azonao atao, ohatra, azonao atao ny manondro fa ianao dia mitazona firaketana an-tsoratra ho an'ny enim-bolana mandritra ny enim-bolana, tahirin-kevitra ara-analyse mandritra ny herintaona, ary antontan-taratasinan'ny mpanjifa mandritra ny folo taona
Doporučený lahatsoratra: Raha manampy valin-kevitra ianao, dia hohazavaina tsy misy farany ny fanehoan-kevitra sy ny metadata. Ny tahirin-kevitra dia voatahiry mba hahafantarana sy hanaiky ny fanehoan-kevitra rehetra manaraka, fa tsy mitazona azy ireo amin'ny filaharam-potoana maoderina.
Ho an'ireo mpisera izay misoratra anarana amin'ity tranokala ity (raha manana safidy izy ireo), dia mitahiry ny mombamomba azy manokana ihany koa isika izay omeny amin'ny profil-ny mpampiasa azy ireo. Ny mpampiasa rehetra dia afaka mahita, manova na mamafa ny mombamomba azy manokana amin'ny fotoana rehetra (afa-tsy hoe tsy afaka manova ny anaran'ny mpampiasa azy izy ireo). Afaka mahita sy manitsy io vaovao io koa ny webmasters.
Inona ny zonao?
Eto amin'ity fizarana ity, tokony hanazava izay zakan'ny mpampiasa ny momba ny angon-dry zareo sy ny fomba ahafahan'izy ireo manintona azy ireo.
Doporučený lahatsoratra: Raha manana kaonty eto amin'ity tranonkala ity ianao na nanampy fanehoan-kevitra ato, dia azonao atao ny mangataka tahiry miaraka amin'ny fanondranana manokana momba ny angon-drakitra izay hitantsika momba anao, anisan'izany ny fampahalalana rehetra omenao anay. Azonao atao ihany koa ny mangataka ny fanesorana ireo angona manokana hitanay momba anao. Ity safidy ity dia tsy ahitana ny angona izay takiana amintsika hitazonana ny antony ara-panjakana, ara-dalàna na ara-piarovana.
Aiza ny angoninao?
Ity fizarana ity dia tokony mitanisa ny famindrana rehetra momba ny tranokalanao any ivelan'ny Vondrona Eoropeana ary mamaritra ny fomba fiarovana ireo fenitra mikasika ny tsiambaratelon'ny Eoropeana. Ity fizarana ity dia mety tafiditra ao amin'ny tranonkalanao, ny fitahirizana rahona, na ny serivisy hafa.
Eoropa angona fiarovana takin'ny lalàna ny hanaovana ny vaovao momba ny mponina Eoropeana izay Nafindra ivelan'ny Vondrona Eoropeana dia voaaro ihany ny fitsipika sy ny lalàna toy ny antontan-kevitra no mipetraka any Eoropa. Noho izany, ankoatra ny toerana fanaovana tahirin-kevitra, dia tokony mamaritra ny fomba azo antoka fa ireo fitsipika ireo nihaona, na ny anao na ny antoko fahatelo, na inona na inona fifanarahana na toy ny fiainana manokana fepetra fiarovana ny modely fifanarahana, na manan-kery orinasa fitsipika .
Doporučený lahatsoratra: Ny fanehoan-kevitry ny mpitsidika dia azo henoina amin'ny alàlan'ny serivisy fanaraha-maso spam-automatique izay afaka mipetraka any ivelany.
Ao amin'ity fizarana ity, tokony hanome fomba fifandraisana amin'ny fiainana manokana ianao. Raha toa ka takiana ny manana mpanafika, azafady mba manome ny anarany sy ny antsipirihany amin'ny antsipiriany.
Raha mampiasa vohikala ho tombontsoam-barotra ianao ary mandray anjara amin'ny famoritana sarotra na fanangonana ny mombamomba anao manokana, dia tokony hanome ireto fampahalalana manaraka ireto ao amin'ny politikanao.
Ahoana no hiarovantsika ny mombamomba anao manokana?
Amin'ity fizarana ity, tokony hazavainao ny fepetra noraisinao mba hiarovana ny angon-drakitra. Ohatra, azonao atao ny manome fanazavana momba ny fepetra ara-teknika, toy ny: encryption; fepetra fiarovana toy ny fanamarinana marobe; ary fepetra hafa toy ny fampiofanana amin'ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny angona. Raha nanao fanamarinana ny fiantraikany manokana momba ny tsiambaratelo ianao, dia azonao atao ihany koa ny manonona izany.
Inona ireo fepetra momba ny fampidirana vaovao?
Amin'ity fizarana ity dia tokony hazavaina hoe inona ny fepetra ahafahana miatrika ny fampidinana ny data, na potika na tena izy, toy ny rafitra fanaraha-maso anatiny, rafitra mifandraika, na valisoa be voninahitra.
Iza amin'ireo antoko fahatelo no manangona angona manokana?
Raha mahazo ny angon-drakitra mpampiasa vaovao ny tranokalanao, anisan'izany ny dokam-barotra, dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny fizarana mikasika ny filazanao manokana momba ny fiainanao manokana ny fampahalalam-baovao.
Inona no fanapahan-kevitra fanapahan-kevitra nataonay sy / na mpampiasa data
Raha ny manome asa izay ahitana mandeha ho azy fanapahan-kevitra - ohatra, mamela ny mpividy mba hampihatra ny bola na hanangona tahiri-kevitra ny dokam-barotra amin'ny mombamomba - tsy maintsy hametraka ireo dingana, ary ahitana ny vaovao mikasika ny fomba ity vaovao ity no ampiasaina, inona no nahatonga ny fanapahan-kevitra ireo aggregated tahirin-kevitra ary inona no zo ananany mpampiasa ny fanapahan-kevitra tsy misy olona an-tsehatra.
Fampahafantarana momba ny indostrian'ny indostrialy
Raha mpikambana ao amin'ny orinasa voatokana ianao na raha manaja lalàna hafa momba ny tsiambaratelo, dia mety hangatahana hanome anao ny vaovao ilaina.
Raha toa ka mitaky misy mila fanazavana fanampiny na manana fanontaniana momba ny fiainana manokana politika, Aza misalasala mifandray aminay amin'ny alalan'ny mailaka amin'ny Privacy.
Tamin'ny www.PetrPikora.com isika handinika ny fiainany manokana ny mpitsidika mba ho tena zava-dehibe. Izany fiainana manokana antontan-taratasy mamaritra politika amin'ny an-tsipiriany ny Karazam-mombamomba no nanangona sy nosoratan'i www.PetrPikora.com sy ny fomba ampiasana azy.
Toy ny tranonkala maro hafa, www.PetrPikora.com dia mampiasa ny rakitra log. Ireo doka ireo dia manindry ny mpitsidika ao amin'ilay tranonkala - matetika ny fomba amam-pitsipika ho an'ny orinasa fampiantranoana ary ny ampahan-javatra amin'ny fampihetseham-peo amin'ny fampiantranoana. Ny fampahalalana ao anaty rakitra ao amin'ny rakitra dia ahitana adiresy Internet (IP), tranokala, Internet Service Provider (ISP), daty / ora famandrihana, pejy mifampitohy / fivoahana, ary angamba ny isan'ny klioketsa. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina mba handinihana ny fironana, ny fitantanana ny tranonkala, ny fitohizan'ny hetsiky ny mpampiasa manerana ny tranokala, ary ny fanangonana ny fampahalalam-baovao. Adiresy IP, ary ny fampahalalana hafa toy izany dia tsy mifandray amin'ny fampahalalana rehetra izay mety ho fantatra manokana.
www.PetrPikora.com dia mampiasa cookies mba hamahàna ny mombamomba ny safidin'ny mpitsidika, mba hanoratana ny fampiasana manokana momba ny tranonkala ahitan'ny mpitsidika toerana na fitsidihana, ary ny manova na manova ny votoatin'ny tranonkala mifototra amin'ny karazana browser na fampahalalana hafa Ny mpitsidika dia mandefa amin'ny alàlan'ny navigateur.
→ Mampiasa cookies ho an'ny dokam-barotra ao amin'ny www.PetrPikora.com i Google, amin'ny maha-mpivarotra mpiara-dia azy.
→ Ny fampiasan'i Google ny cookie DART dia ahafahanao manisy doka ho an'ireo mpitsidika ao amin'ny tranonkala mifototra amin'ny fitsidihany azy ao amin'ny www.PetrPikora.com sy tranonkala hafa ao amin'ny Internet.
→ Ireo mpampiasa dia mety hiala amin'ny fampiasana ny lokony mofomamy amin'ny alalan'ny fitsidihana ny Google doka sy afa-po tambajotra politika fiainana manokana amin'ny manaraka URL - http://www.google.com/privacy_ads.html
Ny Advertising Partners
Ny sasany amin'ireo mpiara-miombon'antoka ny dokam-barotra dia mety mampiasa mofomamy sy ny tranonkala loharanom eo amin'ny toerana. Ny dokam-barotra ahitana mpiara-miombon'antoka .......
Enga anie ianao manontany lisitra io mba hahita ny fiainana manokana politika dia ho an'ny tsirairay ny dokam-barotra mpiara-miombon'antoka ny www.PetrPikora.com.
www.PetrPikora.com tsy misy mahazo na fanaraha-maso ny mofomamy kevitra izay ampiasaina amin'ny fahatelo-antoko mpanao dokam-barotra.
Fahatelo Party Privacy Policies
Raha maniry ny mankarary mofomamy, dia mety manao izany ny tsirairay amin'ny alalan'ny navigateur safidy. More antsipirihany fanazavana momba ny mofomamy manokana ny fitantanana amin'ny navigateur tranonkala dia azo jerena ao amin'ny navigateur "tranonkala tsirairay. Inona no Atao hoe Cookies?
Mino izahay fa zava-dehibe ny fiarovana amin'ny ankizy an-tserasera. Mamporisika ny ray aman-dreny sy ny mpiambina isika mba handany fotoana amin'ny aterineto miaraka amin'ny zanany mba hijery, handray anjara ary / na hanara-maso sy hitarika ny asany amin'ny aterineto. www.PetrPikora.com dia tsy manangona fahalalana ara-pahalalana manokana avy amin'ireo ankizy latsaky ny taona 13. Raha mihevitra ny ray aman-dreny na ny mpiambina iray fa ny www.PetrPikora.com dia manana ny fampahalalana manokana momba ny zaza iray taona teo ambany fe-potoan'ny 13, azafady mba mifandraisa aminay avy hatrany (mampiasa ny fifandraisana amin'ny andininy voalohany) ary hampiasa ny ezaka tsara indrindra ataonay izahay mba hanesorana haingana ireo fampahalalana ireo avy amin'ny rakitsoratra.
Amin'ny alalan'ny fampiasana ny tranonkala, ianao Izao manaiky ny fiainana manokana politika sy manaiky ny teny ao aminy.
Ity Policies Privacy ity dia navaozina farany: Alahady, Aogositra 27th, 2017.
Tokony vaovao farany: Ataovy tsara na manao fanovana ny fiainana manokana ny politika, ireo fiovana dia navoaka eto.
Ity teny fanoratana ity dia ahitana ny fototry ny tahirin-kevitry ny tenanao manokana, mety hanangona, hikarakarana sy hizara, ary koa iza no mety hahazo izany. Arakaraky ny fampiasana ny fanovana sy izay ampiasaina ny plugins fanampiny dia miovaova ny fampahalalana manokana navoakan'ny fivarotana. Manoro hevitra amin'ny mpisolovava iray izahay rehefa manapa-kevitra hoe inona ny vaovao havoaka amin'ny politikanao manokana.
Manangona vaovao momba anao ianao mandritra ny fizotry ny fizahantany ao amin'ny magazay.
Hampiasa cookies ihany koa izahay mba hijerena ny mombamomba ny masonareo rehefa mijery ny tranokalanay.
Fanamarihana: Azonao atao ny maniry bebe kokoa ny politikanao cookie sy ny rohy mankany amin'io fizarana io.
Amin'ny ankapobeny dia mitazona fanazavana momba anao ianao raha mbola ilainay ny fampahalalana amin'ny tanjona izay angoninay ary ampiasainay izany, ary tsy takianay ara-dalàna ny hanohizana azy io. Ohatra, hitazona fampahalalana momba ny filaminana isika mandritra ny XXX taona ho an'ny tetibola sy ny fitakiana. Anisan'izany ny anaranao, adiresy imailaka ary adiresy fandefasana sy fandefasana entana.
Amin'ity fizarana ity dia asio marika hoe iza no ifampizaranao ny data, ary inona no antony. Mety misy izany, fa tsy voafetra ny, analytics, fivarotana, fidirana fidiram-bola, mpamatsy fandefasana entana, ary fidirana fahatelo.
Mizara fampahalalana miaraka amin'ny antoko fahatelo izahay izay manampy anay hanolotra ny baikonay sy hamita tolotra ho anao; ohatra -
Amin'ity andininy ity dia tokony hizara ireo mpampiasa vola fandoavam-bola hafa izay ampiasainao mba handoavana ny vola ao amin'ny fivarotana anao satria ireo dia mety handrindra ny angona mpanjifa. Anisanay ny PayPal ohatra, saingy tokony hesorina izany raha tsy mampiasa PayPal ianao.
Amin'ny fampiasana ity fanitarana ity, dia mety mitahiry ny angona manokana na fizarana angona miaraka amin'ny serivisy ivelany. Mianara bebe kokoa momba ny fomba fiasan'io asa io, anisan'izany izay mety tianao hampidirina amin'ny politika manokana anao.
Loharano: Revolisionan'ny Slider
Raha toa ka mampiasa Google Web Fonts (default) ianao na milalao horonantsary na feo amin'ny YouTube na Vimeo ao amin'ny Slider Revolution, dia manolotra ny fehezanteny mifanaraka aminy amin'ny polisy manokana anao ianao:
Ny tranonkala dia mampiasa plugins amin'ny YouTube, izay ampiasain'i Google. Ny mpikarakara ny pejy dia ny YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Etazonia.
Raha mitsidika ny iray amin'ireo pejinay izay manasongadina ny Plugin YouTube ianao, dia misy fifandraisana amin'ny serasera YouTube. Eto ny mpizara youtube dia ampahafantarina ny amin'ireo pejinay noraisinareo.
Raha tafiditra ao amin'ny kaontinao YouTube ianao, YouTube dia ahafahanao mifandray mivantana amin'ny fitondranao mivantana amin'ny mombamomba anao manokana. Azonao atao ny manakana anao tsy hiditra ao amin'ny kaontinao YouTube.
Nampiasaina ny Youtube mba hahasarika ny tranonkalanay. Izany dia mahaliana amin'ny Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Ny fampahalalana fanampiny momba ny fandefasana ireo angona mpampiasa dia azo jerena ao amin'ny fanambarana fiarovana ny YouTube eo ambany https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Ny tranonkalanay dia mampiasa ireo fepetra nomen'i Vimeo Video vavahadin-tserasera. Ity serivisy ity dia nomen'ny Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Etazonia.
Raha mitsidika ny iray amin'ireo pejintsika ahitana Vimeo plugin ianao, dia misy fifandraisana amin'ny servisy Vimeo. Eto ny mpizara Vimeo dia ampahafantarina ny amin'ireo pejinay noraisinareo. Ankoatra izany, hahazo ny adiresy IP ny Vimeo. Mampihatra izany koa raha tsy tafiditra ao amin'ny Vimeo ianao rehefa mitsidika ny Plugin na tsy manana kaonty Vimeo. Ny vaovao dia alefa amin'ny mpizara Vimeo any Etazonia, izay itahirizana azy.
Raha tafiditra ao amin'ny kaontinao Vimeo ianao, Vimeo dia ahafahanao mampifandray mivantana ny fitondrantenanao mivantana amin'ny mombamomba anao manokana. Azonao atao ny misoroka izany amin'ny alàlan'ny fidirana ao amin'ny kaontinao Vimeo.
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny fomba handaminana ny angon-drakitra ampiasain'ny mpampiasa, azafady mifandraisa amin'ny Politika Vimafe momba ny fiainana privie https://vimeo.com/privacy.
Ho fampisehoana endri-piraketana amin'ny endritsoratra, ity pejy ity dia mampiasa fonosana web izay omen'ny Google. Rehefa manokatra pejy ianao dia mandefa ny fonosam-pejy ilaina ao anaty cache ny tranonkalanao mba hampisehoana tsara ny lahatsoratra sy ny endritsoratra.
Ho an'ity fikandrana ity dia tsy maintsy mametraka fifandraisana mivantana amin'ny serveurs Google ianao. Google dia nanjary nahatsikaritra fa ny pejy Internet dia navoaka tamin'ny adiresy IP. Ny fampiasana endritsoratra Google Web dia natao amin'ny fahalianana amin'ny fanolorana fanamafisana sy fanatanjahantena ny plugin. Izany dia mahaliana amin'ny Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Raha toa ka tsy manohana fonosana anaty tranonkala ny navigateur, ny endri-tsoratra ampiasaina dia ampiasaina amin'ny ordinateranao.
Fampahalalana fanampiny mikasika ny fampiharana ireo angona mpampiasa, dia azo jerena ao https://developers.google.com/fonts/faq sy amin'ny politikan'ny fiainana manokan'ny Google ao amin'ny https://www.google.com/policies/privacy/.
Ao amin'ny ny pejy, Plugins ao amin'ny tambajotra sosialy Soundcloud (Soundcloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) Azo mifampiditra aminy. Ny Soundcloud Plugins mety ho ekena ny Soundcloud famantarana eo amin'ny toerana.
Rehefa mitsidika ny tranonkalanay ianao dia misy fifandraisana mivantana eo amin'ny navigateur anao sy ny mpandika Soundcloud dia apetraka amin'ny plugin. Izany dia ahafahan'ny SoundCloud mandray ny vaovao izay nitsidihanao ny habaka tamin'ny adiresy IP. Raha tsindrio ny bokotra "Like" na "Share" raha miditra ao amin'ny kaontinao SoundCloud, azonao atao ny mampifandray ny votoatin'ny pejy ao amin'ny pejin'ny SoundCloud. Midika izany fa ny SoundCloud dia afaka mampifandray ny fitsidihana amin'ny pejinay miaraka amin'ny kaontinao user. Tianay ny manamarika fa, amin'ny maha-mpamatsy ireny pejy ireny dia tsy fantatsika ny votoatin'ny angona naverina na ny fomba ampiasain'ny SoundCloud. Raha te hahalala misimisy kokoa momba ny politika momba ny tsiambaratelo SoundCloud, alefaso https://soundcloud.com/pages/privacy.
Raha tsy tianao ny SoundCloud mba hampifandray ny fitsidihanao amin'ny tranokalanao amin'ny kaontinao SoundCloud, miangavy anao hiala amin'ny kaontinao SoundCloud.